Home ဆောင်းပါး အထွေထွေဆောင်းပါး
အဖွင့် ဖိုရမ် သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများသတင်းများ ဒဏ်ရာသတင်းများ အင်တာဗျူးများ ဆောင်းပါးပွဲကြိုသုံးသပ်ချက် ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် အထွေထွေဆောင်းပါး မှတ်တမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (ဟိုက်လိုက်) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ပွဲစဉ်များ ပထမအသင်းကစားသမားများ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်များ အထွေထွေAM ခန့် မှန်းပြိုင်ပွဲ AM ခန့်မှန်း ပြိုင်ပွဲ ဇယား Fan Club အထွေထွေဆောင်းပါး
အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ဗီလာကိုနိုင်လျှင် ချန်ပီယံဖြစ်မည်လား	Gu Ru	အာဆင်နယ် အသင်းသည် ၂၀၁၃-၁၄ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ် အက်စ်တွန်ဗီလာ အသင်းကို အိမ်ကွင်းတွင် လက်ခံကစားရမည် ဖြစ်သည်။ ရာသီဖွင့်ပွဲစဉ်ကို အိမ်ကွင်းတွင် ဗီလာနှင့် နောက်ဆုံး ကစားခဲ့ရသည်မှာ လွန်ခဲ့သော ခုနစ်နှစ်ခန့်က ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပွဲစဉ်တွင် အာဆင်နယ်အသင်းသည် အရှုံးရလာဒ်မှ သရေဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဗီလာနောက်ခံလူ မဲလ်ဘတ်သည် အီမရိတ်ကွင်းတွင် ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ဂိုးသွင်းယူသူ အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ဂီလ်ဘတ်တိုဆေးလ်ဗားက ပွဲပြီးရန် ခြောက်မိနစ်အလိုတွင် ချေပဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ချစ်သော အာဆင်နယ်နှင့် ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီမျှော်လင့်ချက်	Gunner CoCo	ကျွန်တော်တို့အားလုံး အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဖလားလက်မဲ့ (၈)ရာသီကို ကြိတ်မှိတ်သည်းခံဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး တဲ့နောက် လာမယ့် ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဖလားလက်မဲ့ရာသီ အိပ်မက်ဆိုးမှ လွတ်မြောက်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ပြန်လည်ရရှိလာဖို့ အသည်းအသန် မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီမှာ မန်ယူအသင်းကို ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်နဲ့နိုင်ပြီး FA ဖလားရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘာဖလားမှ မရတော့ပဲ ဖလားလက်မဲ့ဖြစ်နေတာ (၈)ရာသီ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။
အာစင်ဝင်းဂါးရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်း (သို့) အာဆင်နယ်အသင်း အမြတ် အများဆုံးရသည့် အသင်းဖြစ်လာခြင်း	chan mon	အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အာစင်ဝင်းဂါးရဲ့(policy)ဖြင့် ကစားသမားတွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ၀ယ်ယူပြီး လူငယ်ကစားသမားတွေကို မြေတောင်မြှောက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့ကနေ ငွေကြေးအမြတ် အများဆုံးရတဲ့ ကလပ်အသင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီး။ အာစင်ဝင်းဂါးဟာ ဗီအဲရာ၊ ၀ီးတော့၊ ပီရက်စ်တို့ လိုကစားသမားက အစပြုလို့ ဟင်နရီတို့ အလယ် ၀ီရှီးယား၊ ရမ်ဆေးတို့ အဆုံးကစားသမားတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေး ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Read more... Comments (2)
အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘယ်ကလပ်အသင်းက ဘယ်လိုရလဒ်နဲ့ ရပ်တည်နေပါသလဲ ?	Mr.Yan Naing	၁ဂဂဂ ခုနှစ်ကတည်းက ဖွဲ့​စည်း တည်ဆောက်ခဲ့​​တဲ့​ Football League ဆိုတဲ့နာမည်ကို ဖျက်သိမ်း​ပြီး​(Football League First Division မှ ကလပ်အသင်း​များရဲ့ ဆုံး​ဖြတ်ချက်များအရ)၊ ၁၉၉၂ခုနှစ်၊​ဖေ​ဖော်ဝါရီလ ၂ဝ ရက်​နေ့မှာတော့ First Division ပထမတန်း ဆိုတဲ့ နာမည်ကနေ ပရီး​မီး​ယား​လိဂ် (Premier League) ပြိုင်ပွဲများ ဟုဆိုပြီး ပြောင်း​လဲသတ်မှတ်​ခဲ့​တာဟာ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း(၂၁) ပြည့်နေပါပြီး။ Read more... Add new comment
တစ်ဦးတည်းပိုင်ဘောလုံးကလပ်သင်းဖြစ်ဖို့ အချိန်တန်လာပြီဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်	Gooner4life	လက်ရှိအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ရှယ်ယာအများစုကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသင်းငါးသင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၄၈ ရှိ သူဋ္ဌေးမစ္စတာခရွန်ကီက ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအများဆုံးရှယ်ယာပိုင်ရှင်ကတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃၄ ရှိတဲ့ သံမဏိသူဋ္ဌေး မစ္စတာ အူစမန်နော့ဗ် ဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာအူစမန်နော့ဗ်ဟာ အာဆင်နယ်သင်း ကမ္ဘာအဆင့်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာအောင် အဓိကအကျဆုံးအခန်းကဏ္ဍကနေ စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အသင်းရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေးဗစ်ဒိန်းရဲ့ ရှယ်ယာ ၁၄.၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဝယ်ယူပြီးတော့ အာဆင်နယ်ရဲ့ ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ ဒေးဗစ်ဒိန်းရဲ့ ရှယ်ယာတွေကိုဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ Red and White Holdings ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ပြီး ရှယ်ယာတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဝယ်ယူအပြီးမှာတော့ အသင်းရှယ်ယာတွေရဲ့ ၃၀% ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဒုတိယရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
လန်ဒန်ကလပ်တွေ အဓိက အားပြိုင်ရမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် တိုက်ပွဲ
ဒီမိုး.. ဒီလေ.. ဒီဂျာနယ်တွေနဲ့တော့…..
Emmanuel Frimpong ဟာ ဒီရာသီအကုန်အထိ Fullham အသင်းတွင် အငှါးသွားရောက်ကစား
"It isn't easy being an Arsenal fan"
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page6of 44	Copyright © 2015 Arsenal Myanmar | All of Arsenal fans from Myanmar.. All Rights Reserved. Originated by Thatoe.